गणना भन्दा बढी 50 प्रकार। यस पट्टी जग को गणना, को छत, काठ सिढी को आकार। भवन क्यालकुलेटर।
निर्माण सामग्री, निर्माण calculators, र डिजाइनर को गणना
भवन निर्माण सामाग्री
बाड, पर्खाल, भुइँ
भोल्युम र क्षमता
म लगातार निर्माण सामाग्री वा विशेष डिजाइन विवरण को आकार को गणना को राशि को गणना सामना छु एक फ्रेम घर को निर्माण पछि लाग्दा।
निर्माण कार्यको लागि बोर्ड, काठ वा अन्य काठ काटन - पर्खाल वा भुइँ लागि आवश्यक रूपमा?
Heaters पनि एक निरन्तर गणना आवश्यकता हो। यस खनिज ऊन, फोम वा अन्य इन्सुलेशन हुनेछ। म यस्तो लेखे, मेरो घर कंकाल र इन्सुलेशन सामाग्री को डिजाइन म, इन्सुलेशन लागि तल्ला र छत, र पर्खाल मात्र प्रयोग।
पाटन - अर्को कथा। यो मेरो घर जटिल आकार को छत, र धातु दाद वा अन्य छत सामाग्री को राशि को गणना गाह्रो छ। अनि अझै हामी छत मा खाता मा फोहोर गर्नै पर्छ। अनि छत सामाग्री को एक छत संग धेरै वर्ष को लागि एक घर छ।
निम्न मौसम, पर्खाल अस्तर गर्न। साथै, वाष्प बाधा साइडिंग मानिन्छ ...
स्कूल बीजगणित पाठ्यक्रम परिचित एक व्यक्ति, यी गणना गाह्रो हुने छैन। दुई पल्ट बाहिर जाँच, सूत्र सम्झना, कागज र एक कैलकुलेटर को एक पाना लिनुहोस् ... अनि बाहिर जाँच ... गणना अनावश्यक लागत संग व्याप्त निष्कासन गर्ने त्रुटिपूर्ण त्रुटि छैनन्। तपाईं अधिक, वा यसको विपरीत मा पनि धेरै किन्न केहि छ भने यातायात, काम गर्न सजिलो त मा धेरै राम्रो छैन, र।
त्यसैले सबैले विचार र रेखाचित्र आउनुहुनेछ कि कार्यक्रम को काँध मा यी दिनचर्या गणना पारित गर्न विचार जन्म भएको थियो।
र सबै भन्दा महत्वपूर्ण - गल्ती छैन! आखिर, असफलता को लागत निर्माण समयमा पनि उच्च छ।
म मेरो सेवा आफ्नै हात र सीप-बिल्डर्स संग एक घर निर्माण गर्दै गर्नेहरूलाई मदत गर्नेछ भन्ने आशा।